Home / Blog / Ahoana ny fametrahana ny faritra fanasan-damba amin'ny fomba mahomby kokoa? Manomboha amin'ireto lafiny efatra ireto, hahazoana antoka fa tsara sy tsara no ampiasaina!
2021 / 04 / 10 FisokajianaBlog 6026 0
Famolavolana ny fandroana ankoatry ny gorodona sy ny gorodona, ny safidin'ny fandroana, ny drafitry ny kabinetra fandroana fitaratra misy zavatra lehibe! Namboarina tsara, sady miasa no mitahiry. Ny fandaminana ratsy dia mety miteraka bobongolo, tsy mora tazomina ary tsy ampy ny toerana fitahirizana. Ity manaraka ity dia avy amin'ny fisafidianana ny hilentika, ny fomban'ny kabinetra fandroana, ny famolavolana fitaratra ary ny fanadihadiana haingon-jiro, ny olana lehibe 4 sy ny refy hametrahana tokantrano lehibe sy kely dia azo ampiharina amin'ny fonosana kamo miloko ravina!
Washbasin hisafidianana ny countertop, ambanin'ilay karazana namboarina
sa ny style basin?
1, maodely mavesatra, olona miasa mafy mety amin'ny: countertop
Toetoetra: ny famolavolana ny endrika 100 isa, ambanin'ny fametrahana ny kabinetra fandroana, toerana fitahirizana, fanovana maro sosona.
Fanamarihana: ny sakan'ny countertop dia tsy mety amin'ny kely kokoa, ary ny fametrahana faucets dia tsy maintsy ahitsy mifanaraka amin'ny fahazarana manokana ny fampiasana haavony, mba hialana amin'ny karatra fanasana tanana sy olana hafa. Ho fanampin'izany, satria mora ny famoahana ny faran'ny maty, mora ny mitazona ny splashes, tsy mora ny mitazona ny fahadiovana.
2、 Misafotofoto be, kamo kamo mety amin'ny: ambanin'ny karazana tafiditra
Toetoetra: ny famolavolana countertop cut flush dia mahatonga ny countertop ho malalaka kokoa, azo tehirizina ao amin'ilay faritra toa lehibe kokoa, ary tsy dia manadio toerana maty intsony hanamorana ny fikojakojana.
Fanamarihana: ny sisin'ny seam amin'ny countertop dia mora manafina loto, ary sarotra ny fametrahana sy ny fananganana.
3, entana kely kokoa, trano kely sahaza ny: basin-tsanganana / kovetabe mihantona rindrina
Toetoetra: hibodo faritra kely mba hamonjy habaka betsaka, mety tsara amin'ny paompy kely, famolavolana antsasaky ny fandroana, ary mora apetraka sy hadio.
Fanamarihana: kely kokoa ny toerana fitahirizana kabinetra ao amin'ny trano fidiovana no zava-dehibe indrindra, mila amin'ny alàlan'ny talantalana fitehirizana rindrina hafa, toy ny fampitomboana ny fametrahana ny kojakoja fandroana.
Mifantoka amin'ny kabinetra fandroana ny fitehirizana ny fandroana!
Misokatra sa miafina, iza no hofidiana?
1, zavatra kely kokoa, toy ny famolavolana samihafa azo atao amin'ny: talantalana misokatra
Toetoetra: Ny fanovana ny fomban'ny talantalana amin'ny maro, dia azo ampiasaina amin'ny fanasokajiana sobika mora vidy ary mora idirana.
Fanamarihana: Raha hamandoana mavesatra ny toerana, sarotra kokoa ny mitazona ireo entana fitehirizana, misy toerana mando sy maina mety kokoa.
2、 Zavatra maro kokoa, toy ny fahatsapana fa mety sy madio: fitahirizana kabinetra tsy miankina
Toetoetra: varavarana kabinetra, vatasarihana, entana rehetra madio sy milamina ary ampy ny fitahirizana entana.
Fanamarihana: mila mitandrina ny safidin'ny kabinetra sy ny varavarana varavarana, asaina mifantina fitaovana tsy tantera-drano, hisorohana ny hamandoana sy ny bobongolo. Ny ankamaroan'ny kabinetra fandroana matetika dia mampiasa firafitra vita amin'ny takelaka tsy misy rano na baoritra; kabinetra varavarana kabinetra dia board foam ary ny board Menai no be indrindra.
Fitaratra miaraka amin'ny tena ilaina,
Safidy fitaratra, inona no atolotra anao?
1, voarafitra na tsy misy rafitra
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny olona dia hisafidy mifototra amin'ny endrika, raha amin'ny fomba fijery ny fikojakojana, ny fanadiovana ary ny fikojakojana ny frameless noho ny style framed no mety kokoa. Raha tsy misy ny toetra mampiavaka ny volon-kazo, mora ampiasaina vanim-potoana hiharatsy. Amin'ny fomba fijery estetika, misy safidy sy fiovana bebe kokoa amin'ny endriny, tombony maodely bebe kokoa.
2. Fikolokoloana fitaratra
Ny fitaratra ankapobeny dia manana asan'ny anti-zavona sy anti-harafesina, raha ratsy ny fivoahan'ny trano fidiovana na mando manokana ny toerana dia asaina mividy sarimihetsika anti-zavona na mpiasan'ny zavona hanamafisana.
3、 Haben'ny fitaratra
Ny fitaratra boribory, toradroa toy ny be indrindra, dia azo aorina amin'ny haben'ny velaran'ilay filentika. Ny fisafidianana ny fitaratra dia tsy asaina hisafidy habe lehibe kokoa noho ilay filentehana, tsy mifandanja kokoa ny tahan'ny fahitana.
Jiro rindrina, jiro manaingo ny fomba fandroana,
Inona no tokony hijerena ny fametrahana?
Rehefa tapitra ny jiro fototra amin'ny toerana fidiovana, maro ny olona no hametraka chandelier ao amin'ny faritra hilentika, sconce amin'ny rindrina ho an'ny jiro accents, manampy ny fomba habaka.
Ny fametrahana dia mila mamaritra ny haavony sy ny toerana aorian'ny fandavahana lavaka hanamboarana ny jiro amin'ny rindrina sy ny valindrihana.
Ny fifantohana manokana dia tsy maintsy jerena amin'ny fomba fanaovan-jiro, hazavana sy alokaloka amin'ny alokaloka, ny toerana misy ny fitaratra dia mila jerena mba tsy hisy fiatraikany amin'ny fahitana ny mpampakatra mpanara-maso sy ny rivotra iainana ao amin'ny efitrano iray manontolo.
Previous :: Fanamboarana ny fandroana, kapoka 5 hahatratrarana fiovana mahafinaritra Next: Mametraka talantalana eo amin'ny trano fidiovana, miaina 5 metatra toradroa avy hatrany ny fandroana!
2021 / 04 / 12 6569